Chii chinonzi Chikamu System kuGermany? | Kudzidzira chiGerman, Kudzidza chiGerman
Chii chinonzi Chikamu System kuGermany?
musha » Germany Portal » Chii chinonzi Chikamu System kuGermany?
1 Chikoro cheGerman chechikoro
2 Kunyoreswa kwevana vachangosvika uye vechidiki vanobva kunze kwenyika
3 Kuziva sei chikoro chakanaka
Sisitimu yechikoro cheGerman
Kana vana vako vaine makore matanhatu, vanosungirwa kuenda kuchikoro, nekuti kuenda kunomanikidzwa kuGermany. Zvikoro zvizhinji zveGerman zvinomirirwa nehurumende uye vana vakasununguka kuenda. Kune, hongu, zvikoro zvakazvimiririra uye zvepasi rose izvo zvinopa mari.
MuGerman, hurumende dzematunhu dzakanangana negwaro redzidzo. Izvi zvinoreva kuti chirongwa chechikoro chinosvika padanho kunotsamira padunhu raunogara nemhuri yako. Vana veGerman havawanzo kuve nekaramu yakafanana mune zvese zviitiko, uye zvinyorwa zvinogona kuve zvakasiyana. States zvakare ine mhando dzakasiyana dzezvikoro. Nekudaro, kunyanya, iyo chikoro cheGerman system yakarongedzwa seinotevera:
chepuraimari chikoro Kazhinji, vana vane makore matanhatu okukura vanotanga mabasa avo echikoro muchikoro chepuraimari, izvo zvinosanganisira makirasi mana ekutanga. MuBerlin neBrandenburg chete, chikoro chekutanga chinoenderera kusvika pagiredhi rechitanhatu. Panopera chikoro chepuraimari, iwe nevadzidzisi vemwana wako sarudza kuti ndeapi chikoro chechipiri icho mwana wako aizoenda, zvichienderana nebasa remwana wako.
Weiterführende Schulen (sekondari) - mhando dzinozivikanwa:
Hauptschule (sekondari chikoro mamakisi 5-9 kana gumi)
Realschule (anonyanya kushanda junior chikoro chesekondari chegumi graders)
Gymnasium (yakawedzera chikoro chepakati kwemashanu kusvika gumi nematatu / gumi nematatu magiredhi)
Gesamtschule (chikoro chakazara chevashanu kusvika gumi nematatu / gumi neshanu graders)
Hauptschule naRealschule: Vechidiki vanobudirira kupedza Hauptschule kana Realschule vanokwanisa kudzidzira basa kana vanogona kuchinjira kune yechitanhatu fomu / gore repamusoro paGymnasium kana Gesamtschule.
Gesamtschule: Iyo inosanganisa iyo Hauptschule, Realschule uye Gymnasium uye inopa imwe nzira kune chetatu chechikoro system.
jimunasiyamu: Pakupera kwegumi nemaviri kana kuti wechigumi nemaviri, vadzidzi vanotora bvunzo dzinozivikanwa seA Abitur uye, kana wapedza kubudirira, vanowana gwaro redzidzo yepamusoro sekondari rine kodzero yekudzidza kuyunivhesiti kana yunivhesiti yemasainzi akaiswa. Nekudaro, ivo vanogona zvakare kusarudza kugamuchira kudzidziswa kwehunyanzvi uye kupinda zvakananga mumusika wevashandi.
KUFUNGA IZVI: Hupenyu hwevana kuGermany
Kunyoreswa kwevana vachangosvika uye vechidiki vanobva kunze kwenyika
Kana mwana wako ari wezera rekuchikoro kana iye / iye achipinda kuGermany, iwe hauzombopokana kuti ndeupi mhando yenzvimbo yavanowana kuchikoro. Izvi zvinotemerwa nehutongi hwechikoro mukubvunzana nemasimba emunharaunda. Semitemo yakajairika, vana vachangopinda munyika uye vasingakwanise kuenda kumakirasi ezvikoro zvechikoro nekuda kwekushayikwa kwechiGerman vachazopihwa zvidzidzo zvepadera pachikoro. Chinangwa ndechekuvabatanidza mumakirasi ezvikoro zvechikoro nekukurumidza sezvazvinogona.
Ndinoziva sei chikoro chakanaka
Semutemo, wakasununguka kusarudza kuti mwana wako achapinda chikoro chipi. Saka ipfungwa yakanaka kutarisa kune zvikoro zvishoma. Chimwe chezviratidzo zvechikoro chakanaka ndechekuti inongopa kwete chete yepamusoro-soro dzidzo, asiwo mabasa ekunze akadai semitambo yemitambo, mitambo, mitauro uye mimhanzi mimhanzi uye nzendo dzechikoro. Chikoro chakanaka chinokurudzirawo kuita kwevabereki. Pamusoro pekutsvaga kana chikoro chine nzvimbo yemwana wako, iwe unofanirawo kubvunza nezvesarudzo dzekunze. Kana vana vako vasati vadzidza chiGerman, ita shuwa kuti chikoro chinopa makosi eGerman, anowanzonzi "ChiGerman somutauro wokumwe". Pano, vadzidzisi vanove nechokwadi chekuti mwana wako anonzwisisa izvo zvidzidzo uye anogona kuenderana pamwe nehurongwa.
Ruzivo paVocational Mitauro eGermany
MaProvince eGerman - Bundesländer Deutschland
TAGS: system yechikoro mu germany, mhando dzechikoro mu germany, zera rekutanga chikoro mu germany
Re: Pamusoro bvunzo B1
Re: Family Reunion (A1) Kuongorora Zvose
Re: Rejisi rezinesi uye probeseit